Ny Krizin'ny taona 1780 sy ny antony mahatonga ny Revolisiona Frantsay
History & Culture Revolisiona Frantsay
Ny Revolisiona Frantsay: Ny Krizin'ny taona 1780 sy ny antony mahatonga ny revolisiona
Ny Revolisiona Frantsay dia vokatry ny krizim-panjakana roa izay niainga nandritra ny taona 1750 - 80 taona, ny lalàm-panorenana iray ary ny iray tam-bola, ary ny farany dia manome ny 'tipping point' tamin'ny taona 1788/9, raha nanosika ny minisitry ny governemanta hikomy tamin'ny revolisiona ny ' Ancien ". Ankoatra izany, nisy ny fitomboana ny bourgeoisie, lamina sosialy izay nanimba ny rafi- piarahamonina sosialin'i Frantsa taloha, ny harena, ny fahefana ary ny hevitra.
Ny bourboisie, amin'ny ankapobeny, dia nanakiana mafy ny fitondrana teo aloha teo aloha ary niova izany, na dia mbola niady hevitra momba ny mpahay tantara aza ny tena anjara asany.
Maupeou, ny Parlemantera, ary ny lalam-panorenana
Tamin'ny taona 1750, dia nanjary fantatry ny ankamaroan'ny Frantsay fa tsy niasa intsony ny lalàm-panorenana an'i Frantsa, mifototra amin'ny fomba amam-panaon'ny demokrasia. Izany dia vokatry ny tsy fahombiazan'ny governemanta, na ny tsy fitongilanan'ny minisitry ny mpanjaka na ny faharesena mahatsiravina amin'ny ady, izay vokatry ny fisainana vaovao momba ny fahazavana, izay nanjary nanamontsamontsamontsanana ny mpanjaka mpanohitra, ary tamin'ny ampahany noho ny bourgeoisie nitady feo tany amin'ny fitantanana. . Nipoitra sy nitombo ny hevitry ny 'hevitry ny vahoaka,' firenena, ary 'olom-pirenena, miaraka amin'ny fahatsapana fa tsy maintsy nofaritana sy nofidiana ara-dalàna ny fahefam-panjakana tao anatin'io rafitra vaovao io, izay nahamarika bebe kokoa ny vahoaka fa tsy hoe tsotra fotsiny mampiseho ny katsahin'ny mpanjaka.
Ny olona dia nitonona hatrany ny Firaisamben'ny Jeneraly , fivoriambe telo izay tsy mbola nihaona hatramin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo, ho vahaolana mety hamela ny olona - na ny ankamaroan'izy ireo, farafaharatsiny - hiasa miaraka amin'ny mpanjaka. Tsy dia maro loatra ny fitakiana hanoloana ny mpanjaka, toy ny nitranga tamin'ny revolisiona, fa ny faniriana hitondra ny mpanjaka sy ny vahoaka amin'ny tetezamita akaiky kokoa izay nanome azy ireo hilaza farany.
Ny hevitry ny governemanta sy ny mpanjaka izay niasa tamin'ny andiam-panatanterahana ny lalam-panorenana dia nanan-danja lehibe tao Frantsa, ary ireo parlemanitra 13 izay efa noeritreretina-na farafaharatsiny dia nihevitra azy ireo-ny fizaham-pahamendrehana teo amin'ny mpanjaka . Na izany aza, tamin'ny taona 1771, ny parlemanta Paris dia nandà ny hiara-miasa amin'ny Chineater Maupeou ao amin'ny firenena, ary namaly izy tamin'ny fanavotana ny parlemanta, ny fanavaozana ny rafitra, ny fanesorana ny biraon'ny gidro mifandraika ary ny fametrahana fanoloana mifanohitra amin'ny faniriany. Nanaiky tamim-pangirifiriana ireo parlemantera provinsialy ary nihaona tamin'io ihany. Firenena iray izay naniry ny hanamarina bebe kokoa ny mpanjaka dia hita fa nanjavona ireo izay nananany. Ny toe-draharaha ara-politika dia toa niverin-dalana.
Na dia teo aza ny fanentanana natao handresy ny vahoaka, Maupeou tsy nahazo fanohanana nasionaly ho an'ny fanovana nataony ary nofoanana izy ireo telo taona taty aoriana rehefa namaly ny fitarainana feno fahatezerana i Louis XVI , mpanjaka Louis , tamin'ny famerenana ny fanovana rehetra. Indrisy anefa fa nisy ny fahavoazana: ny fampitam-baovao dia naseho fa malemy ary nifanaraka tamin'ny fanirian'ny mpanjaka, fa tsy ny faniriana tsy hay fehezina izay tiany ho izy. Fa inona, hoy ireo mpandinika any Frantsa, no hanao fanaraha-maso ny mpanjaka?
Ny Estates General dia valinteny tiany indrindra. Fa ny Estates General dia tsy nihaona nandritra ny fotoana lava, ary ny tsipiriany ihany dia tsaroany fotsiny.
Ny krizy ara-bola ary ny Antenimieran'ny voamarina
Ny krizy ara-bola izay nandao ny varavarana misokatra ho an'ny revolisiona dia nanomboka nandritra ny Ady Amerikanina Fahaleovantena, raha nandany livres lavitrisa lavitrisa i Frantsa, mitovy amin'ny vola miditra amin'ny fanjakana mandritra ny herintaona. Saika ny vola rehetra azon'izy ireo avy amin'ny fampindramam-bola, ary ny tontolo maoderina dia nahita ny mety ho trosa manoloana ny toe-karena. Ny olana dia notarihan'i Jacques Necker, mpanao banky frantsay protestanta ary tsy manan-daza teo amin'ny governemanta. Ny haino aman-jery sy ny kaontiny mampivelatra-ny bolantany ampahibemaso, ny Compte rendu au roi, dia nahatonga ny kaonty ho salama-nanamafisina ny haben'ny olana avy amin'ny vahoaka Frantsay, fa tamin'ny alàlan'ny kandida filohan'i Calonne, nitady fomba vaovao hetra ny fanjakana ary mihaona amin'ny volany.
Calonne dia nitondra fanovozam-panovàna izay, raha nanaiky izy ireo, dia mety ho ny fanavaozana goavana indrindra teo amin'ny tantaran'ny Frantsay. Anisan'izany ny fanararaotana ny haba maro ary ny fanoloana azy ireo amin'ny hetra ho an'ny olona rehetra, anisan'izany ireo olo-manan-kaja tsy misy alàlana. Niriny ny fanehoan-kevitra momba ny fanavaozana nasionaly ho an'ny fanavaozana nataony, ary nolavin'izy ireo ho tsy azo notsongaina loatra ny Antenimieran'ny Jeneraly, antsoina hoe Assembly Assembly of Notables, izay nihaona voalohany tany Versailles tamin'ny 22 Febroary 1787. Latsaky ny folo no tsy nanao fivoriambe mendrika sy tsy nisy toy izany Nantsoina nanomboka tamin'ny taona 1626 izany. Tsy fanaraha-maso ara-drariny ny mpanjaka, fa natao ho karazana rubber.
Calonne dia nanao fahadisoana lehibe ary, lavitra ny tsy nanaiky ny fiovana novolavolaina, dia tsy nanaiky hanasazy azy ireo ny 144 mpikambana ao amin'ny Antenimiera. Maro no nanohitra ny fandoavana hetra vaovao, maro ny antony tsy nankasitraka an'i Calonne, ary maro no nino ny antony nanomezany ny fandàvany: tsy tokony hisy haba vaovao tokony hapetraka raha tsy ny mpanjaka voalohany no manontany ny firenena ary, raha tsy voafidy izy ireo dia tsy afaka miteny ho an'ny firenena. Tsy nahitam-bokatra ny fifanakalozan-kevitra ary tamin'ny farany, dia nisolo an'i Brienne i Calonne, izay nanandrana indray mialohan'ny nandavany ny Antenimiera tamin'ny volana Mey.
Niezaka ny handefa ny dikan-tenany manokana amin'ny fiovan'i Calonne amin'ny alàlan'ny parlemantan'i Paris i Brienne, saingy nolavin'izy ireo, nanantitrantitra indray ny Jeneraly Jeneraly ho ny vatana tokana afaka manaiky hetra vaovao. Nandao azy ireo tany Troyes i Brienne talohan'ny niarahany nanao fanandramana, nanolo-kevitra fa hihaona amin'ny 1797 ny General Estates; Nanomboka nanontany mihitsy aza izy hoe ahoana no tokony hamolavola azy sy hivoahany.
Fa ho an'ny tsara rehetra dia ho very ihany satria ny mpanjaka sy ny governemantany dia nanomboka nanery ny lalàna tamin'ny fampiasana ny fampiharana tsy ara-dalàna ny 'fitsaràna ny rariny.' Ny mpanjaka dia noraketina an-tsoratra ho fitarainana amin'ny fitarainana amin'ny filazana hoe "ara-dalàna satria maniry izany aho" (Doyle, Ny Tantaran'ny Oxford an'ny Revolisiona frantsay , 2002, p. 80), ary mampitombo ny ahiahiny manoloana ny lalàm-panorenana.
Ny fitomboan'ny krizy ara-bola dia nahatratra ny fara tampony tamin'ny taona 1788 satria ny fitaovam-pitabatabem-panjakana nipoitra teo anelanelan'ny fiovan'ny rafitra, dia tsy afaka nitondra ny vola takiana, toe-javatra mihamitombo toy ny toetr'andro ratsy ny fahavaratra. Tsy misy ny volan'ny firaketana ary tsy misy olona vonona ny hanaiky fanondrotana na fanovana hafa. Niezaka namorona fanohanana i Brienne tamin'ny famoahana ny datin'ny Jeneraly Jeneraly tamin'ny taona 1789, saingy tsy niasa izy ary tsy maintsy nanaisotra ny vola rehetra ny tahirim-bola. Frantsafrika i Frantsa. Ny iray tamin'ireo hetsika nataon'i Brienne talohan'ny nametra-pialana dia nandresy lahatra ny Mpanjaka Louis XVI ho fahatsiarovana an'i Necker, izay niarahaba ny vahoaka tamin'ny fomba ofisialy ny fiverenany. Tsaroany ny parlemanteran'i Paris ary nahatonga azy mazava tsara fa nitabataba ny firenena izy mandra-pihaonan'ny Jeneraly Jeneraly.
Ny andalana fohy amin'ity tantara ity dia nahatonga ny olan'ny orinasam-bola izay nahatonga ny mponina hanaitra ny fitakiana ny governemanta, izay nanafaka ny Enlightenment, ka tsy nety namaha ireo olana ara-bola ireo mandra-pitenenany. Tsy nisy nahatsapa ny halavan'ny zavatra hitranga manaraka.
Ny Directory, Consulat & Farany ny Revolisiona Frantsay 1795 - 1802
Mbola velona vetivety ve ny lehiben'ny tovolahy iray?
Ny Revolisiona Frantsay, ny vokany, ary ny lova
Ady Napoleonie: Battle of Waterloo
Ady amin'ny revolisiona frantsay: Battle of Cape St. Vincent
Ady Napoleonic: Battle of Talavera
Ny niandohan'ny Revolisiona frantsay tao amin'ny Ancien Régime
Ady Napoleonic: Battle of Salamanca
Ny Revolisiona Frantsay sy Napoléoniana
Sary avy amin'ny Revolisiona Frantsay
Tantara Tantaran 'ny Revolisiona Frantsay - Votoatiny
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny fahafolonkarena?
Endrika: -tradutods- [Ovay] Open book 01.svg Endrik'anarana
Fiovana eo amin'ny Angletera, Grande-Bretagne, ary Angletera
Winston Churchill Teny nalaina
Fanamboarana fehezan-teny mifandraika amin'ny Adjektif Clauses
10 Fanavaozana ny Taom-baovao ho an'ny Artista
Saripika sy lohahevitry ny bokin'i JRR Tolkien Ny Hobbit
Biographie an'i Steve Higgins
Gloria Estefan - Biography of a Superstar Latin
Mbola sarotra ny mividy Suzuki iray ampiasaina?
Apostol Paul - Christian Messenger
Bradley University GPA, SAT sy ACT Data
Ohatra iray amin'ny valin'ny ANOVA
Ny teoria ao ambadiky ny lalàna manerantany fantatra amin'ny anarana hoe Lalàn'ny fifamoivoizana
Fahagagana avy amin'i Jesoa: Fanasitranana ny devoly vehivavy iray manan-janaka vavy
Ny Franchise Movie Movie 'Jaws'
David Letterman ilay Liberaly
Filipy Apôstôly - Mpanara-dia an'i Jesoa Kristy
Aquariums sy ny zon'ny biby - inona no tsy mety amin'ny akoholahy?
Satin tao amin'ny trano faharoa
Inona no atao hoe Shlissel Challah?
Fahatakarana ny famaritana ny fitaovam-piadiana na ny fiadiana am-ponja
Mianara miresaka momba ny toetr'andro amin'ny fiteny alemana
Ny fitsipika vaovao momba ny fahamendrehana amin'ny hip-hop